QALABAYNTA FICUS EE GURIGA: GOORMA IYO SIDEE BAA SAX AH? - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada ficus bedelida guriga
Ficus - isku dheelitirnaan buuxda ee gudaha guriga.
Si loo ilaaliyo qurxinta geedka, waa in dib loo soo celiyaa wakhtigii loogu talagalay iyo sida uu dhigayo sharciyada oo idil.
Inta badan ee shabakadaha ganacsiga ee dhirta ku jira xaaladaha aan haboonayn. Badanaa waa ay fatahaadayaan, ma haystaan ​​iftiin ku filan.
Laakiin xitaa haddii dhirta la iibsaday ay leedahay muuqaal caafimaad oo muuqda, waa in lagu beeraa isla markiiba ka dib iibsashada. Sidee loo bedelaa ficus guriga?
Xaqiiqdu waxay tahay in ficuska iibka ah lagu meeleeyo substrate gaar ah, oo aan ku habboonayn beerashada muddada dheer.
Kontaroolka gaadiidka sidoo kale ma aha mid ku habboon, geedka ma jirto meel loogu talagalay horumarinta. Isku-dhajinta dheriga, waxaad arki doontaa in xididada si qumman kor ugu dhajiyaan hoosta, iyagoo dhex gelaya daloolka godka.
Talo: Ka dib iibsashada, ha u wareejin isla markiiba - sug hal usbuuc, si ficusku u isticmaali doono meel cusub ee deganaanshaha.
Sidee looga saaraa ficus ka soo weelka dukaanka, oo ku dhejin dheriga gurigiisa iyada oo aan waxyeellaynin xididada? Samee arrin aad u adag. Beeraleyda khibrad leh waxaa lagula talinayaa inaadan soo saarin geedka.
Si ka fiican, si taxadar leh u gooy weelka, ka saar. Tani waa sahlan tahay in la sameeyo, maadaama maaddada weelka iibka ay tahay jilicsan oo si sahlan loo gooyo.
Dhalaal dhoobo ah oo dhirta duugoobay ayaa aad u cufsan, laakiin hawshayadu waa inaan si buuxda uga saarno. Si tartiib tartiib ah u samee, si khafiif ah u taabasho dusha sare, oo ka caawiya ul alwaax.
Waa muhiim: Ha jeexin xididada inta lagu jiro nadiifinta - ka dib markaa dhirta laga yaabo inaysan sii noolaan.
Fiidiyowga waxtarka leh: sida loo habboon yahay in loo bedelo ficus guriga?
Haddii dhirtu ay daadad ahaan jirtay, qaybo ka mid ah xididada waa in la burburiyay, waana in la gooyaa.
Si aad u hesho meelahaas, nidaamka xididka waa in la nadiifiyaa.
Gooyo aagagga cayayaanka ah maqnaasho fiiqan, iyada oo aan saameyn ku yeeshay xididdada caafimaadka leh.
Daaweynta xaashiyaha leh jeermis dilayaasha ayaa kugula taliyay dhirta kale ma'aha lagama maarmaan u ah ficus.
Khudaarta caan ah ee ku jirta geedka lafteeda ayaa leh sifooyin bactericidal ah. Nabaradu waxay u bogsan doonaan naftooda.
Next, ficus waxaa la dhigayaa dheri diyaarsan, daboolay ciidda, tamped iyo waraabiyo.
Marka baahida loo baahdo?
Haddii aad ogaato in ciidda dheriga dhoobo aad u dhaqsaha badan, iyo xididada muuqaalka dusha sare, ka dibna waa lagama maarmaan. Laakiin way ka wanaagsan tahay in laga hortago dhacdadan oo kale, la socoshada tirada badan ee qorshaysan, oo ku xiran da'da geedka.
Dhalinyaro, si firfircoon u koraya (1-3 sano) - hal mar sannadkii.
Dhirta da'doodu u dhaxayso 4-6 sano - sannad gudaheed.
Nuqulo hore - 3-4 sano.
Sidee loo qaadaa tallaalka ficus guriga?
Ka waraabiya ka hor inta aan laga saarin. Waxay ka caawisaa xanaaq la'aan dhirta laga soo saaro suxuunta hore.
Diyaarinta taan cusub.
Lakabyo dheecaan leh ayaa la dhigayaa dhinaca hoose, lakabka yar ee carrada ayaa ku shubay.
Nadiifinta xididdada ciidda hore.
Si taxaddar leh, laakiin si taxadar leh, iyada oo aan qaawan oo aan jeexin xididada, nadiifi substrate loo isticmaalo. Iska yaree xididdada la qalajiyey.
Qabashada dhirta dheriga. Fikusku wuxuu ku yaalaa bartamaha, meesha ka hartay waxaa ka buuxsamaya substrate diyaarsan.
Heerka beerto waa inay ahaataa mid la mid ah sida dherigii hore (qawaaniinta beerashada ficus ee dheriga, halkan ka akhriso).
Haddii aad ku dhacdo qoorta xidid, ficus wuxuu bilaabi doonaa inuu waxyeelo.
Xoojinta ciidda. Waxaa si tartiib tartiib ah loo fuliyaa.
Ha ku jajabin dhulka, kaliya dheji dheriga dheriga si aad si fiican u qeybiso.
Waraabinta Fikradaha looma waraabin karo dareeraha tuubada fudud.
Waa in la difaacaa, la sifeeyaa ama diyaariyo habka lagu keydiyo.
Heerkulku waa inuu noqdaa qol, laga bilaabo isticmaalka biyo qabow, geedka ayaa bilaabi doona xanuunka. Waxaad jilcinkartaa biyaha iyo karkarinta iyadoo raacaysa daadin si ay u sii daato lime.
Xulashada ikhtiyaarka ah - biyo diirran ama biyo ah. Kadib transplanting, ku shub ficus si fara badan ilaa dareeraha ku shubaa digsiga.
Dhowr saacad ka dib waraabinta, biyaha ka saar digsiga. Waraabinta soo socota waxay ku bixisaa oo kaliya markaad buuxiso lakabka sare ee lakabka saddex meelood meel (hubi qalajinta adoo fartaada ku gelinaya carrada).
Talo: Qalliinka tallaalka ee qaangaarka ah ee qaliinka aan dhaawac laheyn waa dhib. Sidaa darteed, si loo ilaaliyo qiimaha nafaqada ee substrate, waxaa loo isticmaalaa in lagu badalo iyada oo leh saddex meelood meel ka mid ah kartida.
Qalitaanka ka dib, ku rid ficus meeleeda iyo doorbidiisa dhinac la mid ah iftiinka. Haddii ay ku koraan daaqad cadceeda, waxay ku qiyaasaan markii ugu horeysay.
Mararka qaar way adagtahay Ficus inuu la qabsado xaaladaha cusub, waxana uu bilaabmaa inuu daadiyo caleemo. Waa qalad si mar kale dib loogu soo celiyo, marka la eego in ciidda aysan ku habooneyn.
Sidoo kale, xaaladdan, muhiim maaha in dib loo habeeyo, bilaw inaad wareegto, quudiso. Leave the plant oo kali ah, ha u soo kabato iyada oo u gaar ah.
Waxaad ku daadi kartaa oo kaliya Epin, waxay xoojinaysaa geedka iyo ka caawisaa inay dib u soo kabato iyo bilaabaan sii kordhaya.
Xaji socodka xaaladda carrada iyo qoyaanka hawada. Xilliga hawada kulul, ku buufin biyo jilicsan oo jilicsan.
Waa shardi u ah badbaadada carrada cusub - heerkulka mawduuca. Ficus waa inaysan barafoobin, heerkulka waa in lagu hayaa inta udhaxeysa 22-250.
Digniin: qolka qabow, wuxuu bilaabi doonaa inuu waxyeelo oo uu dhinto.
U hoggaansanaanta dhammaan sharciyada ficus-ku-tallaalidda ayaa kuu oggolaanaya inaad koraan nuqul caafimaad leh oo qurux badan oo qurxinta gudaha gurigaaga.
Dhismaha dayrta dayrta
Waqtiga ugu fiican waa guga ama xagaaga.
Xaaladda ugu weyn waa hawada diiran oo qalalan.
Growers growers inta badan ma weydiin su'aasha: sidee iyo goorma ayaa ficus loo tarxiili karaa?
Qalitaanka Ficus ee dayrta - waqtiga diyaarinta xilliga nasashada. Nidaamka koriinka ayaa hoos u dhacaya, iyo isku-uruurinta xoogga waxay bilaabmaysaa inay ku dhexjirto (sida loo daryeelo ficus xilliga qaboobaha ee guriga laga heli karo halkan).
Miyuu suurtogal ah in lagu bedelo ficus bisha November?
November - bilowga xilliga nasashada.
Waqtigaa, saacadaha iftiinka maalinta ayaa la gaabin, iyo dhirtu ma soo saari karto nafaqooyin ku filan.
Wuxuu u baahan yahay inuu ku noolaado, qarash gareeyo xagaaga iyo kaydka dayrta.
Dabcan, wareejinta ficus laga bilaabo Nofeembar ilaa Maarso maahan wax la rabo.
Warshadu way horay u adag tahay, habkuna wuxuu u horseedi doonaa baahida loo qabo in la is waafajiyo, la qabsado buufiska. Hase yeeshe, waxaa jira kiisas oo loo baahan yahay bedelasho dhuleed.
Waqtigaas ma sameyn kartid, geedka ayaa bilaabay inuu yareeyo, ama kalluun ka yimaad waraabinta aan guulaysan.
Xaaladdan oo kale, qalliinka ayaa leh waxyaabo gaar ah:
Xayawaanka, dheecaan, suxuunta, biyaha waraabka iyo buufinta waa inay ahaadaan kuwo kulul.
Ku rid bacaha shaaha oo lagu qooyey biyo karkaraya lakabka dufanka.
Farsamadani waxay gacan ka geysaneysaa ka hortagga cirridka carrada iyo bixinta nafaqada dheeraadka ah ee xididdada.
Iska yaree caleemaha daaha leh oo daciif ah, oo daciifiya, oo fidsan, si aanay u qaadin xoogga ubaxa.
Ha ku ridin geedka qolka qabow ama windowsill. Xaqiiji in marka hawadu aysan ka helin hawo qabow ka soo jeeda hawada.
Digniin: gaar ahaan caleemaha taabashada khatarta ah, xitaa geesaha, si aad u samayso galaas baraf ah oo daaqada ah.
Waxay ku dhibtoodaan barafka xaafadda.
Xulashada carrada saxda ah waa qodob muhiim ah oo lagu kobciyo dhirta gudaha.
Ficus ma aha mid aad u xasaasi ah oo ku saabsan qaabka ciiddalaakiin weli waxaa jira shuruudaha qaarkood.
Dhismuhu waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaad ah ama waxoogaa acidic ah, neefsana leh, qoyaan fiican.
Dhab ahaan ma ahan mid ku haboon oo leh maaddooyin sarreeya oo dhoobo ah. Waxay joojin doontaa qoyaanka, taas oo keeni doonta dildilaaca ee xididada.
Waxyaabo kala duwan ayaa la doortaa waxayna ku xiran tahay da'da dhirta.
Nuqullo yaryar waxaad u baahan tahay xaddiga ugu sarreeya, dadka waaweynina waa in ay noqdaan kuwo cufan.
Cabbiraadyada shaybaarka dhallinyarada - humus caleen, peat, ciid oo tiro le'eg.
Dadka waaweyn - humus, dhulka la jarjaray, peat, ciid (1: 1: 1: 1) ama humus, cows, sand (2: 2: 1).
Dhiirrigelinta lagama maarmaanka ah ayaa sidoo kale lagu gaari karaa iyada oo lagu darayo qadar yar oo kumbiyuutar ah.
Dhagaxyaduna waxay ka dhigtaa xargaha hawada, waxay nuugaan qoyaan iyo bacrimin, ka dibna si tartiib ah ula wadaagaan xididada.
Ku darista biohumus waxay kicisaa koritaanka ficus, waxay hagaajisaa noolaanshaha carrada cusub.
Lime ama burka dolomite waa in sidoo kale lagu daraa ciidda. Macdantaasi waxay uxasaxeysaa oo waxay ku kordhisaa magnesium iyo calcium.
Waxaad ku dari kartaa ash alwaax, waxa kale oo ku jira qaybaha raadka.
Talo: haddii aadan haysan fursad aad ku diyaargaroobto isku dhafkaas, u diyaargarow, adoo si weyn uga muuqda shabakadaha ganacsiga.
Halabuurka waxaa mar walba lagu tilmaamaa baakadka, waxaadna samayn kartaa xulasho sax ah si loo hubiyo raaxada ugu badan ee xayawaankaaga.
Waa maxay suxuunta la doorto?
Waxaa suurtagal ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad tixgeliso astaamaha qof walba.
Weelasha dhoobada waxay u nadiifisaa qoyaanka si fiican, taas oo macnaheedu yahay inay ka ilaalinayaan dhirta inay si shucuur ah u dhaafaan. Laakiin tani waa in lagu xisaabtamaa ka hor inta aan la fuulin.
Si looga hortago dhoobo ama dhoobo dhoobo ah oo laga soo ururiyo dhammaan qoyaanka ka soo baxa ciidda, ku hay biyaha biyaha saacad.
Bacriminta ma nuugeyso biyaha. Markuu doorto, kor u qaad dhererka lakabka dusha sare ee hoose.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la saaro lakabka peat ama sphagnum on - taasi waxay hagaajinaysaa aeration ee xididada.
Fikradaha jirkoodu waxay ku habboon yihiin tuubooyin alwaax ah. Ka hor intaadan isticmaalin, waxay ku gubeen gudaha gudaha si ay u sameeyaan lakab khafiif ah dhuxul.
Waxay qabataa doorka jilicsanaanta, deoksidis ciidda waxayna ka ilaalisaa alwaaxka ka soo qulqulaya.
Beelaha waa in laga sameeyaa geedkii ama geed. Noocyada kale ee geedaha si dhakhso ah ayey u noqdaan kuwa aan la isticmaali karin, waana inaad beddeshaa waqtigii khaldanaa, tani maahan mid ku filan tijaabooyinka dadka waawayn.
Dharka dhererka leh qiyaastii dherer siman iyo dhexroor ayaa sameeya.
Suufiyeyaasha aadka u sarreeya ama ballaadhan ma shaqeyn doonaan - ciidda, oo aan ku daboolin xididada, waxay noqon doontaa dhanaan. Noocyada kala duwan ee guud ahaan guud ahaaneed ayaa ka horjeeda.
Ka reeban waa beerashada ficus ee qaabka bonsai. Xaaladahaas oo kale, suxuunta guriga iyo kuwa ballaadhan ayaa la doortaa, oo leh dherer aan ka badnayn 10 sentimitir.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido qoraalada kale ee kaa caawin doona inaad ku guulaysato horumarinta ficus iyo daryeelka dhirta:
Sida loo faafiyo ficus guriga?
Maxay caleemaha u noqdaan huruud, madow iyo dhacaan? Maxaa la samaynayaa kiiskan?
Waa maxay faa'iidooyinka iyo waxyeelada ficus? Jilicsan ama ma aha?
Dheriga cusub ayaa la doortaa 3-4 sentimitir ka ballaadhan kii hore. Marka dhirta la dhigo, farqiga u dhexeeya xididada iyo geesaha waa inay ahaadaan 3 sentimitir - kuwani waa xaalado ku haboon horumarka nidaamka xididka.
Intaa waxaa dheer, dhererka ee xididdada loo baahan yahay in lagu aaso by 2-3 sentimitir ka soo lakabka drainage. Taasi waa, 5-6 cm oo xagga hoose ah. Xaaladdan oo kale, lakabka sare ee dhulka waa in aan ka badnayn 5 cm.
Qoryo alwaax ah oo loogu talagalay transplanting ficus qaangaar ah ayaa lagu doortaa 6-7 cm ballaaran iyo 8-10 cm ka sareeya.